Catégorie : Lesona 9: Rehefa nanao ny tany Andriamanitra : Ny Genesisy sy ny fahamarinana ara-Baiboly. Fizarana 2
MANAM-PAHAIZANA MARO tany aloha no namaky ny Baiboly ka nahafantatra tamin'izany fa Andriamanitra no namorona ny tany. Nahatonga azy ireo ho liana tamin'ny fandinihana bebe kokoa momba ny zavaboary izany fahamarinana ara-Baiboly izany, ka nanomboka nanao fikarohana mikasika ny asan-tanan'Andriamanitra izy ireo. Izany fikarohana izany no nitarika ho amin'ny fiantombohan'ny siansa môderina. Anisan'izany manam-pahaizana momba ny siansa izany i Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray ary i Robert Boyle. Ninoan'izy ireo fa nampiseho bebe kokoa ny asa nataon'Andriainanitra ny asa fikarohana nataony.
Niova ny siansa taorian'ny revolisiona frantsay. Nanjary tsy nino an'Andriamanitra intsony ny manam-pahaizana, ka tsy nanan-toerana tao arnin'izany intsony Andriamanitra. Nataon'i Charles Darwin izay nampalaza izany hevi-baovao izany tao amin'ny bokiny nampitondrainy ny lohateny hoe "L'origine des especes" (1859).Nanalavitra ny Baiboly ny siansa nanomboka tamin'izay fotoana izay ka tsy nino intsony ny tantaran'ny Genesisy ny olona. Nambaran'izy ireo fa tantara namboamboarina tsy maneho ny tena zava-nisy akory izany.
Mampianatra izany hevitra izany ve ny Baiboly? Tantara nindramin'ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ireo firenena manodidina azy fotsiny ve ny tantaran'ny Baiboly mikasika ny niandohan'ny fiainana teto an-tany? Moa ve ny tantara ao amin'ny Genesisy maneho amintsika tokoa ny fomba fijery mikasika ny niandohan'ny aina? Azontsika itokiana ve ny Baiboly? Marina ve ny zavatra voalazany?
Hovaliantsika ao anatin'ny lesona mandritra ity herinandro ity ireo fanontaniana ireo.